Rooble oo war adag kasoo saaray doorashadda afduuban | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo war adag kasoo saaray doorashadda afduuban
MUQDISHO, Soomaaliya - Maxamed Xuseen Rooble, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda xil gaarsiinta ayaa soo saaray warsaxafadeed ka kooban 9 qoddob oo uu uga hadlayo arrimaha doorashooyinka, xilli ay dhawaan mucaaridku qaadaceen doorashadda Soomaaliya.
Rooble, ayaa ugu horeyn soo dhaweeyey go'aan ay guddiga doorashooyinku ka qaateen qaar ka mid ah kuraasta doorashooyinkooda muranka badani uu ka dhashay, waxana uu soo saaray warsaxaafadeed uu uga hadlayo qaabka wixii iminka ka danbeeya loo qabanayo doorashadda kursi kasta oo ka tirsan Aqalka Hoose, si doorashaddu ugu dhacdo qaab daah-furnaan ah oo lagu wada qanacsan yahay.
Rooble ayaa warkan uu soo saaray ku sheegay in ay ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho caddaalad ah, isagoo xusay inuu diyaar u yahay ka jawaabida tabashooyinka la xiriira daah-furnaan la’aanta doorashada ee kasoo yeereysa daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ku jiraan midawga Musharixiinta, Bulshada Rayidka ah iyo Beesha Calaamka.
Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu xusay in Ra’iisul Wasaaruhu uu cadaynayo in mas’uuliyadda hogaaminta siyaasadeed ee Doorashooyinka ay leeyihiin Golaha wadatashiga Qaranka, oo uu isagu Madax u yahay, sidaas awgeedna uu Goluhu balanqaadayo Madaxbanaanida Guddiyada Doorashooyinka oo mas’uul ka ah hirgalinta Heshiisyada Siyaasadeed ee hagaya Doorashooyinka.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa la sheegay inuu magacaabayo wakiilo la socda dhaq dhaqaaqa doorahsooyinka, kuwaasoo warbixin joogta ah siinaya xafiiskiisa.
Waxana qoddobadii ku xusnaa war-murtiyeedka uu soo saaray oo ahaa 9 qoddob, ka mid ahaa in Soo xulista ergada ay si buuxda ugu madaxbanaan yihiin duubabka, caaqilada iyo bulshada rayidka , ee beesha ama Jufada leh kursiga, iyadoo aan cid kale faragalin ku sameyn karin kursiga beeshaasi.
Warsaxafadeedka ka soo baxay xafiiska Rooble, ayaa daba jooga shir jaraa'id oo uu Muqdisho ku qabtay Af-hayeenka guddiga doorashooyinka heer fedraalka, Axmed Aaden Safina, kaasoo sheegay in doorashadadooda dib loogu noqonayo kuraasta tirsigoodu yahay Hop#154 iyo Hop#103 kuwaasoo ay ku soo kala baxeen Wasiirka howlaha guud ee koonfur galbeed Maxamed Cali iyo Sareedo Maxamed Cabdalla.
Midawga musharaxiinta oo horey u qaadacay qaabka ay u socdaan doorashooyinka aqalka hoose ayaa waxaa Muqdisho uga soconaya maalmahan shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka, waxana saacadihii ugu danbeeyey shirkooda ku biiray masuuliyiin ay ka mid yihiin Cumar Cabdirashiid iyo Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, iyada aan la ogayn sida ay uga fal celin doonaan warka Rooble ka soo baxay ee doorashadda la xiriira.